Fampanantenan’ny Filoha tamin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana tamin’ny 2013 - TsyCoolKoly
Fampanantenan’ny Filoha tamin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana tamin’ny 2013
Accueil|Fampanantenan’ny Filoha tamin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana tamin’ny 2013
Fampanantenan’ny Filoha tamin’ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana tamin’ny 2013	TsyCoolKoly	2017-09-07T05:45:49+03:00
Ireto manaraka ireto ny fampanantenan’ny Filoha :
Fitsarana tsy mitanila
Famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny entina
Fametrahana ny Fitsarana ambony (Haute cours de justice)
* Loharanom-baovao : Tatitry ny UMM/ECES tamin’ny 2 desambra 2013
Ireto no mandrafitra ny fanjakana tan-dalàna:
Fanajana ny antanatohatry ny fenitra: mifototra amin’ny hoe, ny fenitra dia natao hanaja izay eo amboniny raha ny tokony ho izy. Noho izany, tokony hanaja ny lalàna sy ny fifanarahana iraisam-pirenena ary ny lalàmpanorenena ny fanapahan-kevitra ataon’ny fanjakana.
Fitovian’ny olom-pirenena manoloana ny lalàna: milaza izany fa ny tsirairay, na ny vondrona dia samy afaka manohitra ny fenitry ny fitsarana, raha toa ka tsy mifanaraka amin’ny fenitra ambonin’io izany.
Fahaleovan-tenan’ny fitsarana: ny lalàmpanorenana no mamaritra mazava ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana. Tsy vokatry ny fisaharan’ny fahefam-panjakana irery izany, fa ao koa ny antoka ho an’ny mpitsara mba tsy ho tratry ny teritery sy ny fandrahonana izay mety hampananosarotra amin’ny fahafahan’izy ireo mitsara.
Fitsarana tsy mitanila: manondro ny tsy fisian’ny fitsarana mialoha, izay tokony hampiavaka ny mpitsara. Araka izany, ny fahaleovan-tenany dia mahakasika kokoa ny fifandraisan’ny mpitsara amin’ny fahefaham-panjakana hafa. Io no fepetra (ilaina nefa tsy ampy) ho an’ny tsy fitanilany amin’ny fifandraisany amin’ny olona tsaraina.
Ny hevitrao mikasika ny fanajana ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara
1- ireto manaraka ireto ny fisehon’ny fampanantenan’ny fahefana mpanatanteraka tamin’ny fifidianana mikasika ny ady amin’ny kolikoly:
Ny hevitrao manodidina ny fanamarihana sy ny faneken’ny Filoha ny ady amin’ny kolikoly
2- Fandaniana ny Paik’adimpirenena ho an’ny ady amin’ny kolikoly
Araky ny famaritan’ny rakibolana Larousse, ny paik’ady dia ny fahaizana mandrindra ny hetsika sy ny fiasana amim-pahakingana hanatrarana ny tanjona. Mba hialana amin’ny afitsoky ny kolikoly, ny eto Madagasikara dia nandrafitra programa atao hoe « Paik’adim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly » na SNLCC. Hita ao anatin’io paik’ady io ny fametrahana rafitra mpanatanteraka, ny fanekana ny tolo-kevitra iraisam-pirenena samihafa (“initiatives”) miady amin’ny kolikoly ary ny fandaniana lalàna sy fepetra fampiharana ny lalàna miady amin’ny kolikoly. Folo taona no hanatanterahana io paik’ady io, izany hoe nanomboka ny 2015 ka hatramin’ny 2025. Maneho ny fanatontosana an’io paik’ady iadiana amin’ny kolikoly io ny tabilao manaraka :
Famaritana ny tanjona stratejika sy ireo lalan’asa
Paik’ady ho amin’ny fanatanterahana ny SNLCC 2015-2025
Fanatanterahana ny asa
Fanombanana en cours…
3– Lalàna momba ny ady amin’ny kolikoly
Narafitra ny lalàna mifandray amin’ny ady amin’ny kolikoly. Ny tabilao manaraka no mampiseho amintsika ny famintinana ny dingana nandehanan’ireo lalàna ireo.
Avy amin’nyparlemanta ny tolo-dalàna
Avy amin’ny governemanta ny volavolan-dalàna
Ny azonao lazaina mikasika ny fampiharana ny lalàna momba ny ady amin’ny kolikoly eto Madagsikara
Fametrahana ny Fitsarana avo (HCJ)
Fitsarana miavaka ny Fitsarana avo ary izy irery ihany no afaka mitsara ny Filohan’ny repoblika raha ampangain’ny parlemanta ho namadika na niray tsikombakomba manohitra ny fanjakana izy.
Ny hevitrao mikasika ny fametrahana ny HCJ eto Madagasikara
Famerenena ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka
Azo refesina amin’ny tamberin’andraikitra ataon’ny olom-boafidy io sehatra io. Manaraka etsy ambany ny fomba sasantsasany isehoan’ny tamberin’andraikitra eto Madagasikara :
Singa milaza ny fisokafan’ny teti-bola (Indice budget ouvert)
Ny hevitrao mikasika ny famerenena ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka eto Madagasikara